I-china ivala ibhokisi likashukela eligcinwe ekhaya elinamasokisi elenziwe ngephepha lephepha Umkhiqizi nomhlinzeki | I-Huaguang
Ibhokisi Lokugcina Amaphepha
vala ibhokisi lukathayela lokugcina ibhokisi amasokisi egumbi lephepha
lukathayela amasokisi isitoreji ibhokisi
Usayizi: 35 * 35 * 35cm
Uhlobo Lwamaphepha: lukathayela
Ukupakisha Imininingwane: ama-PC amabili ku-polybag noma imfuneko sakho
Est. Isikhathi (izinsuku) 15 17 Kuxoxiswane
I-Takeaway: okungukuthi khetha izinto zokupakisha ezifanele, ukwakheka kokupakisha ngobuchwepheshe obuhlakaniphile, ukupakisha izimpahla zemodeli yesakhiwo sesitsha nokwenziwa kahle komklamo wokuhlobisa ukupakisha, kuze kufike kumbala wokupakisha, umumo, okokusebenza nokunye konke ukwakheka ulimi, lunikeza impahla impahla ehlukile, kepha futhi nokusungulwa kwesithombe esiphelele sento, njengoba imfuneko yabathengi yahlulela ikhwalithi kakolweni emakhobeni, isabelo somklamo wokupakisha kuleli phepha, amaphuzu amahlanu nezinto ezintathu ezinkulu , okuqukethwe kwenkomba yabangani bakaHuaguang.Siphinde futhi sizame ukwephula leli bhokisi likathayela eligcina ibhokisi ngale ndatshana.
Idizayini yokupakisha iphrojekthi ehlelekile, edinga izinqubo nezindlela zesayensi nokuhleleka ukufezekisa ukupakisha okuphumelelayo nokukhulisa inzuzo lapho umkhiqizo ufakwa emakethe. Bamba kuphela ukuma okunembile kwecebo lokupakisha umkhiqizo, ngokuhumusha okuyimpumelelo nokwethulwa komklamo wokupakisha umkhiqizo kanye nenhlanganisela ephelele yomqondo wokumaketha webhizinisi, ukuze ukwazi ukuklama.Lebhokisi lokugcina lamasokisi ayinkimbinkimbi akuyona inqubo elula kusuka ekwakhiweni kuya ekukhiqizweni futhi ekugcineni kwethulwe kubathengi.
1. Amaphuzu ayisihlanu wokuqamba kokuklama
Umsebenzi wokupakisha ukuvikela izimpahla, ukuhambisa imininingwane yezimpahla, ukusebenziseka kalula, ukulungele ukuthutha, ukukhuthaza ukuthengisa. Njengesihloko esibanzi, ukupakisha kunemvelo embaxambili yokuhlanganisa impahla nobuciko. Idizayini yokupakisha ephumelelayo kufanele ibe namaphuzu ayisihlanu alandelayo:
(1) Ukuvezwa kweshelufu
(3) Indlela yokubukeka
(4) Umbono wokuhweba
(5) Incazelo yemisebenzi nezici
Ngicabanga ukuthi umbono wokuthi ibhokisi lamasokisi lukathayela unikeza wonke umuntu muhle kakhulu, okuluhlaza okotshani ithoni yayo yesisindo yi-tonal, ifanelana ukusetshenziswa kwekhaya nokugcinwa kakhulu, kumnandi futhi kuyajabulisa.
2. Izakhi zokubukeka kwezakhi ezizimele
Ukubukeka isici ukubukeka kwempahla esemaphaketheni isibonisi ebusweni, kufaka phakathi isayizi yokubonisa, usayizi nomumo. Kunezinhlobo ezintathu esizibonayo empilweni yethu yansuku zonke, okungukuthi, isimo semvelo, ifomu lokufakelwa kanye nefomu elenzeka ngengozi. Kepha lapho sifunda uhlobo lomkhiqizo, kufanele sithole ifomu elisebenza kunoma iyiphi impahla, okungukuthi, ukuthola okujwayelekile, bese siyibiza ngokuthi ifomu elingaqondakali.
Siyazi ukuthi umthethosisekelo wefomu uyisici sefomu, noma lokhu kuyisici sefomu, amafomu aguqukayo akhiwa izindlela ezithile nemithetho ethile. Ifomu lakhiwa ngamaphuzu, imigqa, izindiza nemizimba. Izinhlobo zokupakisha ikakhulukazi zifaka isilinda, i-cuboid, isigaxa, amafomu ahlukahlukene kanye nokuhlanganiswa kwamafomu ahlobene, kanye nezinhlobo ezahlukahlukene ezakhiwe ukusikeka okuhlukile. Ubusha bamafomu okupakisha budlala indima ebaluleke kakhulu ekuqondisweni kokubuka kwabathengi, futhi amafomu abukekayo ahlukile angashiya abathengi benomqondo ojulile ngokunyathelisa. Abaqambi bokupakisha kufanele bazijwayele izici zezinto zefomu nezinkulumo zabo, futhi bakuthathe lokhu njengokwaziswa ukuveza ubuhle befomu.
Lapho sicubungula izinto zokubukeka komklamo wokupakisha, kufanele futhi sikuqonde kusuka ku-Angle yomthetho osemthethweni wobuhle. Ngokwesimiso esihle sobuhle besakhiwo sokupakisha sihlanganiswe nezici zemisebenzi uqobo lomkhiqizo, izinto ezahlukahlukene zizohlanganiswa ngokomzimba nangokwemvelo ukuthola isithombe esiphelele sobumbano.
Leli bhokisi lokugcina amasokisi lukathayela lisesimweni sesembozo nesisekelo. Okufakiwe kwenziwa ngothayela, okuhlukanisa ibhokisi elikhulu kwizikwele ezincane ezilungele amasokisi. Lolu hlobo lwebhokisi luthandwa kakhulu ngamakhasimende.
3. Izinto zokwakheka
Ukwakheka isithombe esiphelele sophawu lwentengiso, imidwebo, umbhalo kanye nenhlanganisela ebusweni bokubonisa bokufakwa kwempahla. Le nhlanganisela yezinhlangothi ezine inika umphumela ophelele wokupakisha. Ukwakheka komkhiqizo wezinto zophawu lokuhweba, imidwebo, umbhalo nombala wokusetshenziswa okulungile, okufanelekile, okuhle, kungabizwa ngokuthi imisebenzi emihle kakhulu yokuklama.
Uphawu lokuhweba luphawu, ibhizinisi, isikhungo, impahla kanye nesithombe ngasinye sophawu lokusungulwa. Izimpawu zokuhweba zifaka ezombusazwe, ezomnotho, ezomthetho, ezobuciko neminye imikhakha. Isici sophawu lokuhweba sinqunywa ngomsebenzi waso, ifomu. Ifuna ukuveza okuqukethwe okunothile ngendlela elula nejwayeleke kakhulu esikhaleni esincane, futhi ngasikhathi sinye kudinga obukayo ukuthi aqonde umqondo wayo wangaphakathi ngesikhathi esifushane. Ngokuvamile, izimpawu zokuhweba zingahlukaniswa zibe yizinhlobo ezintathu: uphawu lwentengiso, uphawu lokuhweba kanye nenhlanganisela yombhalo nemidwebo. Idizayini ephumelelayo yophawu lwentengiso kufanele ibe umkhiqizo wenhlanganisela ephilayo yezwi lokudala. Ubuciko ukuhlanganiswa, ukuhlaziywa, ukwenziwa nokwenziwa komqondo othile ngokuya ngezidingo zedizayini. Ngokucabanga kwefilosofi, umqondo wedizayini uguqulwa usususwe enkulumweni engaqondakali uye ekwakhiweni kwesithombe kakhonkolo.
Isibalo somhlobiso wokupakisha ikakhulu sibhekisa emfanekisweni womkhiqizo nakwesinye isithombe somhlobiso osizayo. Imidwebo, njengolimi lokuklama, ukukhombisa izinto zangaphakathi nezangaphandle zesithombe futhi idlulisele imininingwane kubathengi ngendlela yezithombe ezibukwayo. Ngale njongo, ukuma okunembile kokuklanywa kwezithombe kubaluleke kakhulu. Inqubo yokubeka inqubo inqubo yokujwayela konke okuqukethwe kwemikhiqizo, kufaka phakathi uhlobo lwezimpahla, izimpawu zokuhweba, incazelo yamagama womkhiqizo kanye nesimo semikhiqizo efanayo nezinye izinto eziningi okufanele zijwayelwe futhi zifundwe.
Imidwebo ingahlukaniswa ngemidwebo ebonakalayo kanye nemidwebo yokuhlobisa ngokwezinhlobo zazo zokuveza.
Ukusetshenziswa kwamasu okudweba, ukuthwebula izithombe, njll. Ukudweba kuyindlela eyinhloko yokwakhiwa komhlobiso wokupakisha, ngokomqondo jikelele wokupakisha udinga ukudweba izithombe, zezimpahla. Uma kuqhathaniswa nesithombe esinezithombe, inezici zenkululeko yokuzikhethela, ukucwengwa nokwenza okujwayelekile. Ukudweba kuyindlela yokwazisa, ukuhlobisa kanye nokuthengiswa kwempahla. Kodwa-ke, isimo sezentengiselwano sokupakisha kwempahla sinquma ukuthi ukwakhiwa kufanele kugqame isithombe sangempela sempahla futhi kunikeze abathengi isithombe enembile. Ngakho-ke, ukuthwebula izithombe kuyindlela engcono kakhulu yokuveza isithombe sangempela futhi enembile ekubonakalweni kwamaphakethe nokuhlobisa.
Ihlukaniswe ngamasu wokumelela nalawo angaqondakali. Izibalo ezingokomfanekiso, izingqimba zomhlaba, izilwane noma izitshalo kungasetshenziswa njengemifanekiso engokomfanekiso ukumela okuqukethwe nezakhiwo zephakeji. Amasu we-Abstract asetshenziselwa i-freehand brushwork ngaphezulu, sebenzisa i-abstract dot, ulayini, ubuso bejometri ukuma kwephethini, umbala wombala noma umphumela wokuthungwa ukwakha isithombe, esifushane, esinesibindi, esinomqondo wefomu, futhi kube yindlela eyinhloko yokuveza umhlobiso wokupakisha. Ngokuvamile, ifomu likakhonkolo nesisho esingaqondakali akuhlukanisiwe ekwakhiweni kwamaphakethe nokuhlobisa, kepha kuhlanganiswe komunye nomunye.
Ukuhlanganiswa kokuqukethwe nefomu kungumthetho ojwayelekile wokwakhiwa kwezithombe, kunqubo yokwakhiwa, ngokuya ngesidingo sokuqukethwe kwezithombe, khetha amasu wokumelwa ahambisanayo, ukufeza ubunye befomu nokuqukethwe ekwakhiweni kwezithombe, ukudala Ibonisa umoya wobudala, isitayela sobuzwe besimo esisebenzayo, umnotho, umsebenzi omuhle wokuklama wokudweba yimfuneko eyisisekelo yabaqambi bokupakisha.
Leli bhokisi lesokisi likathayela lingelesitoreji sasendlini. Ngakho-ke, ukwakheka kwayo akudingi ukugqamisa imvelo yophawu lwentengiso, kepha kudinga ukunaka umklamo wezithombe. Ukusetshenziswa kwama-motif kaKhisimusi kwenza ibhokisi libukeke likhululeke kakhulu.
Idizayini yombala ithatha indawo ebalulekile ekwakhiweni kwamaphakethe. Umbala uyinto ebalulekile ekwenzeni ubuhle nokugqamisa imikhiqizo. Ukusetshenziswa kombala wokupakisha kungumqondo wokuklanywa kwesithombe wonke, ukwakheka kuxhumene kakhulu. Ukupakisha izidingo zombala we-flatness, i-homogenization, lo ngumbala wesihlungi, ocwenga ukuphakama kwesifinyezo. Kususelwa ekuhlanganeni kwabantu nemikhuba yombala, izinga eliphezulu lehaba nombala kuyindlela yobuciko bokupakisha. Ngasikhathi sinye, umbala wephakheji nawo kufanele ukhawulelwe ngenqubo, izinto zokwakha, ukusetshenziswa nendawo yokuthengisa.
Langaphambilini Iphinda isetshenziswe kabusha i-Rigid Cardboard Rose Flower Box YeNtombi
Olandelayo: Ibhokisi lesipho eliyindilinga elenziwe ngokwezifiso nebhokisi lesethi esezingeni eliphakeme
CD Paper Isitoreji Ibhokisi Desk Muhle Isitoreji Orga ...
Iphepha Isitoreji Ibhokisi Muhle Office / Ikhaya Isitoreji ...
amakhadibhodi grey ekhabetheni isitoreji ibhokisi unde ...
Ikhwalithi ephezulu ngokwezifiso ukuphrinta edeskini collectio ...
Office noma ekhaya isitoreji iphepha ibhokisi nge cap enkulu ...